Gobolka wuxuu bixiyaa maalgelin si looga caawiyo kumanaan dad ah oo dheeraad ah gobolka Washington helitaanka daryeelka caafimaadka hab dhaqanka ee u dhow guriga - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Gobolku wuxuu bixiyaa maalgelin si looga caawiyo kumanaan dad ah oo dheeraad ah gobolka Washington helitaanka daryeelka caafimaadka hab dhaqanka ee u dhow guriga
Gobolku wuxuu bixiyaa maalgelin si looga caawiyo kumanaan dad ah oo dheeraad ah gobolka Washington helitaanka daryeelka caafimaadka hab dhaqanka ee u dhow guriga
Deeqaha gobolka waa qeyb ka mid ah qorshaha Inslee si loogu daro awoodna loogu bixiyo baahiyo kala duwan oo maxalli ah, oo ay ku jiraan xarumaha caafimaadka habdhaqanka degdegga ah, daryeelka waallida, iyo baahiyaha kale ee gaarka ah.
OLYMPIA, WA –Maanta Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay gudoonsiisay 22 mashruuc wadar ahaan $ 33.8 milyan oo deeq ah si loogu taageero 395 sariirood oo cusub iyo adeegyo bukaan-socod oo gacan ka geysan doona dadka leh baahiyo caafimaad oo kaladuwan oo kaladuwan isla markaana siin doona meeleynta bulshada maxalliga ah dadka ka tagaya Bariga iyo Cusbitaalada Gobolka Galbeedka.
Deeqahani waxay taageeraan Gov. Jay Inslee's qorshe shan sano ah si loo casriyeeyo loona beddelo nidaamka caafimaadka maskaxda ee Washington, iyadoo ujeedadu tahay in la soo afjaro meeleynta bukaan-socodka madaniga ah ee isbitaalada waaweyn ee gobolka marka la gaaro 2023 iyadoo laga doorbidayo dhismayaal yar yar oo bulshada ku saleysan
“Qorshaheena ku aadan wax ka badalka nidaamka caafimaadka habdhaqanka ee gobolka Washington si wanaagsan ayuu u socdaa. Lacagtani waxay taageereysaa dadaalkeena si aan u xaqiijino in dadka reer Washington ay heli karaan daryeelka ay u baahan yihiin, meel u dhow gurigooda iyo dadka ay jecel yihiin, ”ayuu yiri Gov. Jay Inslee. "Waxaan uga mahadcelinayaa sharci-dajiyayaasha iyo hoggaamiyeyaasha maxalliga ah wadashaqeyntooda joogtada ah si loo hubiyo inaan maal-gelinno daryeelka saxda ah ee kuwa u baahan."
Waxaan mar hore la soo daalaa dhacaynay caqabadda dad badan oo u baahan daryeel ku tiirsanaan maskaxeed ama kiimiko ah marka loo eego inta aan haysanno sariiro iyo boos bannaan. Go'doominta iyo saameynta COVID-19 ayaa ka dhigeysa caqabaddaas xitaa mid deg deg ah, "ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Deeqahani waxay gacan ka gaysanayaan xoojinta jawaabta bulshada iyaga oo u furaya fursado badan oo dadku ku heli karaan daryeel gaar ah oo maxalli ah, goob u dhow nidaamyada taageerada ee ay yaqaannaan ee ay ku kalsoon yihiin. ”
Deeqaha waxaa lagu siiyay sidan soo socota:
Xarumaha Caafimaadka Habdhaqanka Intensive
Caafimaadka Maskaxda ee Buuxda ee Tacoma Pierce County - $ 1.96 million, 16 sariirood oo kuyaala Tacoma
Cascade Investing, LLC - $ 1.61 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Chewelah
Adeegyada Daryeelka Caafimaadka Aristo - $ 1.96 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Renton
Xarumaha Gaarka ah ee Daryeelka Asaasaqa
6th Avenue Senior Living, LLC - $ 612,500, 41 sariirood oo ku yaal Tacoma
Guryaha Waqooyiga Baker, LLC - $ 1.92 milyan, 54 sariirood oo ku yaal Wenatchee
Sowe Healthcare Consulting - $ 1.96 milyan, 24 sariirood oo kuyaala Burlington
Cascade Investing, LLC - $ 1.61 milyan, 32 sariirood oo ku yaal Chewelah
Americare, LLC - $ 1.96 milyan, 40 sariirood oo ku yaal Pasco
Marinnada marinnada Qoyska - $ 1.22 milyan, 4 sariirood oo ku yaal Spokane
Nolosha Lucid - $ 588,258, 4 sariirood oo ku yaal Olympia
Qabiilooyinka Isbahaysiga ah ee keydinta Boosaska Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha - $ 1.96 milyan, 32 sariirood oo ku yaal Keller
90-180 Maalin Muddo Dheer Xarumaha Ballanqaadka Madaniga ah
Dib-u-cusbooneysiinta Soo-kabashada, Inc. - $ 1.96 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Federal Way
Thurston Mason BH-ASO - $ 1.54 milyan, 6 sariirood oo ku yaal Tumwater
SHC Medical Center, Toppenish / Astria Toppenish Hospital - $ 1.96 million, 10 sariirood oo ku yaal Toppenish
Xarunta Qiimaynta iyo Daaweynta, LLC - $ 1.85 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Marysville
Xarumaha Adeegyada La Kordhiyay
Xushmee Daryeelka Kalkaalinta - $ 1.94 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Everett
Adeegyada Kobcinta Magaalada Emerald, LLC - $ 1.96 milyan, 16 sariirood oo ku yaal Lakewood
Mashaariicda wax ka qabta baahiyaha gobolka
Excelsior - $ 1.96 milyan oo loogu talagalay adeegyada bukaan-socodka ee magaalada Spokane
Holman Recovery Center / Grandview Homes - $ 749,700 oo loogu talagalay daaweynta ku xadgudubka mukhaadaraadka, 36 sariirood oo ku yaal Arlington
Adeegyada Caafimaadka Isku-dhafan ee Bulshada, LLC - $ 686,000 ee loogu talagalay adeegyada bukaan-socodka ee Longview
Adeegyada Beesha Lutheran Northwest - $ 510,803 adeegyada bukaan socodka ee ku yaal Kennewick
Isbitaalka Virginia Mason Memorial - $ 1.30 milyan oo loogu talagalay adeegyada bukaan-socodka ee Yakima
Kuwa qaata deeqaha waxaa lagu xushay hanaan tartan ah oo ay fulisay Ganacsigu iyada oo lala kaashanayo Waaxda Caafimaadka, Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka iyo Maamulka Daryeelka Caafimaadka ee gobolka. Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa dhismaha, helitaanka iyo kharashyada qalabka la xiriira aasaasida tas-hiilaadka, deeq-bixiyeyaashuna waa inay dayactiraan xarunta ugu yaraan 15 sano. Maaliyaddan gobolka waxay ka faa'iideysan doontaa $ 30.5 milyan oo dheeraad ah maalgashiga dhismaha ilo kale oo dawladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay.
Deeqahaani waa labada wareeg ee ugu dambeeya ee 2019-2021 maalgelinta gobolka ee xarumaha caafimaadka hab dhaqanka. Ganacsiga waxaa la siiyay in ka badan $ 12.3 milyan bishii Janaayo iyo $ 23 milyan bishii Maajo ee sannadkan, taasoo ka dhigeysa wadarta deeqaha raasumaalka ee xarumaha caafimaadka hab dhaqanka ku dhowaad $ 70 milyan.
Xarunta 'Excelsior Integrated Care Center' waxay u adeegtaa carruurta iyo dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 21 sano ee Degmadda Spokane. $ 4.4 milyan oo deeq ah oo ka timid wareegyadii hore ee xarumaha caafimaadka habdhaqanka maalgelinta oo ay weheliso ilo kale oo maalgelin gaar loo leeyahay iyo kuwa maxalli ah si loo dhiso xarunta cusub ee 48-sariirood ah isla markaana la kordhiyo awoodda Excelsior si loo siiyo xasilinta xasilloonida iyo daaweynta, maareynta ka noqoshada sugan, daryeelka bukaan jiifka degdegga ah iyo barnaamijyada leexinta .
“Waxaan ka mahadcelineynaa iskaashiga gobolka ee naga caawinaya sidii aan u miro dhalin lahayn himiladeenna ku saabsan Xarunta Daryeelka Isku-dhafan ee Excelsior Waxaan la wadaageynaa sharaf weyn inaan dhameystirno mashruuc baaxad weyn leh, kaasoo si weyn noo kordhiyay awooddeena inaan ugu adeegno carruurta iyo dhalinyarada yar-yar ee Degmada Spokane, ”ayuu yiri Scott Davis, oo ah Madaxa Hawlgalka Sare ee Sare.
Ka baro wax badan oo ku saabsan dhammaan barnaamijyada maalgelinta Xarumaha Ganacsi ee Ganacsiga halkan.
← Deeqda cusub ee federaalku shaacisay waxay taageertaa mashaariicda Badbaadada Bilowga ah iyo iskaashiyo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada gobolka Washington inay dib u bilaabaan, dib u dhistaan ​​oo ay noqdaan kuwo adkeysi badan $ 2 milyan oo ka mid ah deeqaha gargaarka ee COVID ayaa hadda ufuran kuwa aan macaash doonka ahayn →